सीमा विवादको कुरा उठाएपछि चीनले नेपाली कांग्रेसलाई लेख्यो यस्तो पत्र, केछ पत्रमा ? — Imandarmedia.com
सीमा विवादको कुरा उठाएपछि चीनले नेपाली कांग्रेसलाई लेख्यो यस्तो पत्र, केछ पत्रमा ?
काठमाडौँ । नेपालस्थित चिनियाँ दूताबासले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको छ । हुम्लामा चीनले नेपाली भुभाग मिचेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाइरहेका बेला चिनियाँ दूताबासले कांग्रेसलाई चार पृष्ठ लामो पत्र लेखेको हो ।
(दूूताबासले कांगे्रसलाई लेखेको पत्रबाट अनुदित अंश अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको)
ओली सरकार फेरि लाग्यो यस्तो जनविरोधी खेलतर्फ, आन्दोलनको आधिबेहरी आउने पक्का